Inona ny atao hoe Marketing Marketing? | Martech Zone
Na dia efa am-polotaona mahery aza izahay no nanoratra momba ny marketing momba ny atiny, heveriko fa zava-dehibe ny hamaliantsika ireo fanontaniana fototra ho an'ny mpianatra marketing ary hanamarinana ny fampahalalana nomena an'ireo mpivarotra efa za-draharaha. Ny marketing amin'ny atiny dia teny mahaliana. Na dia nahazo vahana tato ho ato aza izy io, tsy tadidiko ny fotoana iray izay tsy nisy atiny nifandray taminy ny marketing. Saingy misy paikady marketing momba ny atiny hafa noho ny fanombohana bilaogy fotsiny, ka andao hametraka loko manodidina ilay andianteny.
Content Marketing dia ny fandrindrana, ny famolavolana, ny fampandrosoana, ny fanatanterahana, ny fizarana, ny fampiroboroboana ary ny fanatsarana ny atiny izay novolavolaina hahazoana mpanjifa vaovao, hitazonana ny mpanjifa ankehitriny, ary hampiakarana ny sandan'ny fifandraisan'ny mpanjifa ankehitriny.
Ahoana ny fomba fiasan'ny marketing amin'ny atiny?
Efa folo taona mahery aho no nanampy ny orinasa tamin'ny paikadim-barotra momba ny votoatiny. Ity ambony ity dia horonantsary nampiasainay hanampiana ny mpanjifanay hahafantatra ny fomba fampiasantsika marketing amin'ny atiny hitondrana orinasa amin'ny alàlan'ny tranokalan'izy ireo, marketing amin'ny fikarohana, marketing amin'ny media sosialy ary dokambarotra an-tserasera.
Misy ny fampitahana izay nampiasako efa ela rehefa tonga varotra mifanohitra amin'ny doka. Ny dokam-barotra dia mametraka paosy amin'ny matau ary milatsaka ao anaty rano, manantena fa hanaikitra ny trondro. Ny marketing dia ny fahitana ny trondro, ny famakafakana rehefa manaikitra, ny manaikitra, ary ny faharetan'ny hanaikitra.
Ny atiny dia atiny… whitepaper, lahatsoratra bilaogy, horonan-tsary, podcast, infographic na zavatra hafa azo raisina hampita ny hafatrao. SAINGY content marketing mitaky fahatakarana hoe iza ny mpihaino anao, inona ny fomba fampitana hafatra, mahita hoe aiza ny mpihaino, mahalala ny tanjon'izy ireo, ary mamokatra andian-tantara sy karazan-atiny sahaza ho an'ireo mpanjifa na mpanjifa ireo. Anisan'izany ny fomba fizarana sy fampiroboroboana hampiasanao azy ireo hahatratrarana azy ireo.
Paikady marketing amin'ny atiny
Be loatra ny orinasa manafangaro ny marketing atiny ho doka. Tsy azon'izy ireo ny antony tsy nahatonga ny fiovam-po ny bitsika, ny fanavaozana ny satan'isa na ny bilaogy. Ny marketing amin'ny atiny dia tsy eo noho eo, paikady ny marketing amin'ny atiny mitaky fanentanana sy torolàlana mba hahafahanao mitarika ny mpihaino amin'ny alàlan'ny fividianana, fitazonana na fizotran'ny upsell. Toy ny fangalarana dia ny jono, matetika ianao dia tsy maintsy manana votoatin'ny votoaty hampiroborobo mandritra ny toeram-pisakafoanana mba hisarihana ny mpanaraka anao.
Karazana varotra atiny
Ireo olona ao amin'ny QuickSprout dia nanoratra lahatsoratra mahafinaritra tao amin'ny karazana marketing amin'ny atiny ary rahoviana no hampiasa azy ireo. Tsy hiditra amin'ny karazana rehetra izahay, fa te-hifantoka amin'ireo atiny 6 lehibe hitanay fa tena mety amin'ny mpanjifanay amin'ny fananganana ny haino aman-jery tompony harena:
Articles - fananganana mahafinaritra tranomboky atiny miaraka amina lahatsoratra faran'izay avo lenta izay mamaly fanontaniana ho an'ny prospect, mpanjifa ary manome leadership leadership ao anatin'ny indostria no fototry ny orinasa rehetra. Ireo orinasa dia mazàna mihevitra ny bilaogy ho toy ny paikady iray isaky ny mandeha, saingy tena fampidiram-bola miverimberina sy paikady fampifangaroana zanabola izany. Ny lahatsoratry ny bilaogy rehetra dia azo zahana sy tondroina isan'andro mba hampitomboana ny fahaizanao misarika, mitazona ary manatsara ny mpanjifa. Ny fitorahana bilaogy ho an'ny orinasa dia manome ny sakafo ho an'ny fikarohana sy ny fiaraha-monina mba hiasa ary manakiana ny fikambanana rehetra.
an-tsary - Ny famolavolana sary fampahalalana voadinika tsara izay misy lohahevitra saro-pantarina, manazava azy tsara, ary manome endrika azo entina azo jerena sy zaraina amin'ny fitaovana sy haitao marobe dia tombony lehibe ho an'ny fikambanana rehetra niara-niasa taminay. DK New Media mitohy ho mpitarika amin'ity paikady ity, rehefa nanadihady, namolavola, namolavola, nizara ary nanohana infografika zato. Izahay koa dia manome ireo tahiry ifotony miverina amin'ny mpanjifanay mba hahafahan'ny sary miverina amin'ny fampisehoana hafa sy ny fitaovana marketing.
Whitepapers - Raha mahasarika ny infografika dia hitantsika fa niova ny whitepapers. Na dia mamaky sy mizara lahatsoratra sy infografika matetika aza ireo mpitsidika ny tranokalanao, dia hatakalo matetika ny mombamomba ny fifandraisana izy ireo mba hahazoany milentika lalindalina kokoa amin'ny lohahevitra iray tadiavin'izy ireo. Ny tanjon'ny olona misintona whitepaper dia matetika dia mikaroka ny hanao fividianana haingana dia haingana izy ireo. Ny fananganana làlana iray avy amin'ny paositra iray, infographic mankany amin'ny antso-to-action mankany amin'ny pejy fandraisana mba hisoratra anarana sy hisintona whitepaper dia nanam-bintana lehibe ho an'ny mpanjifanay rehetra.
Presentations - Ny fananganana fahatokisana, fahefana ary fitokisana amin'ny indostriao dia matetika no mitaky anao hanolotra lohahevitra amin'ny fihaonambe, webinar, na fivarotana fivarotana. Ny fametrahana an'izany fampisehoana an-tserasera amin'ny sehatra toa ny Slouriare, avy eo ny fizarana izany amin'ny alàlan'ny lahatsoratra sy media sosialy dia mety hisarika ny sain'ny sasany amin'ireo namanao.
Videos - Ny tsy maintsy ananana amin'ny paikadin'ny votoatin'ny fikambanana rehetra dia ny horonan-tsary. Raha milaza teny arivo ny sary iray, ny horonan-tsary dia afaka manome fifandraisana ara-pientanam-po mihoatra ny tetika rehetra. Fahaiza-mitarika, torohevitra, horonan-tsary manazava, horonantsary fijoroana vavolombelona… miresaka mahomby amin'ny mpihaino azy ireo izy rehetra ary takiana bebe kokoa isan'andro. Tsy lazaina intsony fa matetika ny olona dia mitady horonantsary mihoatra ny media hafa!
karazana verinia - Ny famerenana ny hafatrao any amin'ny mpamandrika dia iray amin'ireo fiverenana avo indrindra amin'ny tetikady marketing atiny. Amin'ny tsy tapaka mandefa mailaka ny vinavinanao sy ny mpanjifanao, ny hafatrao dia manome lanja sy fampahatsiahivana fa eo ianao rehefa mila anao izy ireo. Ireny paikady hafa rehetra ireny dia mety hitarika ny olona mankany amin'ny marika tsy vonona ny hividy… amin'izay fotoana izay no tianao hiantohana ny fisoratana anarana amin'ny mailakao. Ny paikadin'ny atiny rehetra dia tsy maintsy manana tetikady marketing amin'ny mailaka hikolokoloana sy hitondrana ny mpamandrika efa lasa fiovam-po.
Ahoana no fomba hamoronana paikady marketing amin'ny atiny
Mahagaga fa ny dingana voalohany raisintsika rehefa miasa miaraka amin'ny mpanjifa dia tsy fikarohana sy fampivelarana ny kalandrie atiny. Ny dingana voalohany ataontsika dia ny famakafakana ny tranokalan'izy ireo ankehitriny sy ny fahefany an-tserasera hahazoana antoka fa afaka mitarika mpitsidika mpivarotra fikarohana, mpankafy na mpanaraka media sosialy, na mpitsidika hafa amin'ny alàlan'ny fizotran'ny taranaka mitarika. Ireto misy fanontaniana sasany tadiavinay valiny:
Moa ve misy lalana mankany amin'ny fiovam-po isaky ny atiny rehetra manosika ny mpamaky mankany amin'ny hetsika tianao ho ataon'izy ireo?
Is Analytics naparitaka araka ny tokony ho izy mba hahazoana antoka fa afaka mandrefy ny fiantraikan'ny marketing amin'ny atiny hiverina amin'ny loharano iray ianao?
Voatsara tsara araka ny tokony ho izy ve ny tranonkalanao mba hahitanao ny valiny ateraky ny motera fikarohana? Search engine optimization dia làlan-kaleha ho an'ny paikady atiny rehetra.
Hita ve ny atiny ary novaina ka azo zaraina amin'ny media sosialy? Ny fanamafisana azonao avy amin'ny media sosialy dia mety hampiakatra ny fitsidihanao, ny fiovam-ponao ary koa ny fametrahana ny motera fikarohana anao.
Azo aseho araka ny tokony ho izy ve ny atiny amin'ny finday na tablette? Ny sasany amin'ireo mpanjifanay dia mahita ny 40% -n'ny fifamoivoizany avy amin'ny finday!
Raha vantany vao tafapetraka io fototra io, dia miasa izahay mba hikaroka ny atiny handresen'ireo mpifaninana aminao, hamolavola paikady manampy anao hifaninana, ary hamolavola tetiandro atiny izay hampihena ny fotoana ilainao handroahana ny vidiny isaky ny mitarika (CPL) raha mbola manohy mampitombo ny anao anjara amin'ny feo (SOV), mitondra fiara ary manatsara ny isan'ny fiovam-po, ary mampitombo ny anao amin'ny farany fiverenana amin'ny fampiasam-bola amin'ny marketing rehefa ela.
Ny varotra votoaty voajanahary dia mety mitaky fotoana bebe kokoa ahazoan'ny orinasa anao antoka, ka manafaingana ny paikadim-barotra momba ny votoaty dokam-barotra sy fampiroboroboana ary koa ny paikadim-pifandraisana amin'ny daholobe dia afaka manampy anao hanana fitarihana haingana kokoa, fitsapana ary refy ny paikadinao amin'ny fomba mahomby, ary manitatra ny mpihaino anao ary mitaona am-pahombiazana.
Ohatrinona ny atiny ilaintsika?
Ny renin'ny fanontaniana rehetra apetraky ny mpanjifa. Ny fampitahana amiko dia ity… hazakazaka ny varotra atiny. Ny manontany ahy hoe ohatrinona ny atiny ilaina dia toy ny manontany mpamily fiara mihazakazaka manao ahoana ny faharetany handresena. Arakaraka ny mampandeha tsara ny maotera dia arakaraka ny maha tsara ny kodiarana no mampanan-talenta kokoa ny mpamily - ny vokatra tsara kokoa.
Ny marketing amin'ny atiny dia mitaky fampiharana, fitsapana ary fanatsarana tsy tapaka mba handresena ny mpifaninana aminao! Tsy ny famokarana atiny bebe kokoa, fa ny fananganana tranomboky voafaritra misy ny atiny izay manarona ireo dingana rehetra amin'ny dian'ny mpividy mba hanampiana azy ireo hiova fo.
Ohatrinona ny vidin'ny marketing amin'ny atiny?
Doka hafa amin'ny fanontaniana! Manoro hevitra izahay ny hampielezana teti-bola malalaka fifandraisana amin'ny daholobe, fampiroboroboana ary famokarana atiny hanomboka orinasa. Mety hahazo lafo be izany ($ 15k US isam-bolana) fa io no fototra fantatsika fa mandeha tsara. Azonao atao ihany koa ny manomboka raha tsy misy ny PR sy ny fampiroboroboana, maharitra ela kokoa vao mihombo.
Ato anatin'ny volana vitsivitsy dia tokony manomboka mahita momentum ianao ary mitarika entina miditra. Tao anatin'ny taona dia tokony ho afaka namaritra tanteraka ny programa ianao ary mahatakatra ny vidiny tafiditra isaky ny mitarika. Azonao atao ny manova sy mandanjalanja ny teti-bolanao eo anelanelan'ny fampandrosoana ny atiny, ny fampiroboroboana ary ny fifandraisana amin'ny daholobe mba hampitomboana ny fiatraikany, hampihenana ny vidinao isaky ny mitarika, ary hitondra fitarihana na fanovana bebe kokoa.
Ataovy ao an-tsaina fa ny mpifaninana aminao dia manara-maso ny paikadim-barotra momba ny votoatiny miaraka, amin'izay mety hitombo na hihena ny fifaninanana - mitaky anao hanitsy araka ny tokony ho izy ny teti-bolanao sy ny antenainao. Manana mpanjifa manjaka amin'ny marketing amin'ny atiny izahay satria tsy misy ny fifaninanana, ary manana mpanjifa tsy maharaka ny fifaninanana fotsiny izahay satria tsy afaka mifanaraka amin'ny loharanon-karena ampiasain'ny mpifaninana aminy. Paikady lehibe afaka manomboka foana famintinana ny fifaninanana, na izany aza!
Tags: paikady fitorahana bilaogykalandrie atinyfampandrosoana ny votoatyContent Marketingpaikady marketing amin'ny atinyfampiroboroboana ny atinyfiovam-ponypaikadin'ny bilaogy orinasavidiny isaky ny mitarikamailakapaikadin'ny mailakahoronantsary mpanazavaohatrinona ny atiny ilaintsikaohatrinona ny vidin'ny marketing amin'ny atinyLahatsary Marketingprpaikady fampisehoanafisondrotanafifandraisana amin'ny vahoakaquicksproutfiverenana amin'ny fampiasam-bola amin'ny marketinganjara amin'ny feoslidesharekarazana marketing amin'ny atinypaikadin'ny horonantsaryinona nyinona ny marketing amin'ny atinypaikadin'ny whitepaper